Ma cadda sababta ay Iowa u heli doonto qadar yar oo ah tallaalka coronavirus-ka marka loo eego marki | KWIT
Somali News 12.17.2020
Bayaanka ayaa lagu xusay in qeybinta sidoo kale hoos loo dhigay gobolada kale. Hay'addu ma aysan sharraxin sababta qoondayntu u yaraanayso.
Iowa ayaa ka warbixisay dhimashada 97 dheeraad ah maalintii Khamiista iyadoo tirada dhimashada gobolka ay korortay oo ay gaadhay 3,451. In ka badan 262,000 ayaa laga helay cudurka, oo ay ku jiraan 70 kale oo ka tirsan Gobolka Woodbury. Waxaa jirey 151 dhimashooyin ka dhacay Degmada Woodbury. Isbitaalada gudaha ayaa ku dhacay 59 ka dib markii ay sare u kaceen seddex lambar laba todobaad ka hor.
Afartan ka mid ah gobolka Iowa ee 99-ka degmo ayaa haatan leh celcelis togan oo wanaagsan labadii toddobaad ee la soo dhaafay oo ka badan 15%.
Gobolka Ida ayaa leh heerka ugu sarreeya ee dhanka wax-qabadka ee waqooyi-galbeed Iowa ku dhowaad 23%.
Degmada Woodbury ayaa waxyar uun hoos uga dhacday 16.4%.
Saraakiisha Nebraskans waxay ku dhiirrigelinayaan dadka inay tixgeliyaan in laga baaro coronavirus ciidaha ka hor haddii ay qorsheynayaan inay arkaan qoys ballaaran.
Sarkaalka caafimaadka ee gobolka ayaa sheegaya in tani ay ku dareyso lakab dheeraad ah oo ilaalin ah kuwa qorsheynaya inay isu yimaadaan.
Labadii toddobaad ee la soo dhaafay, celceliska toddobada maalmood ah ee kiisaska cusub ee maalin kasta ku dhaca Nebraska ayaa hoos uga dhacay ku dhowaad 1,800 illaa 1,200 oo kiisas cusub maalin kasta Arbacada.